रेडक्रसको केन्द्रीय समिति विघटन, नयाँमा राजनीतिक भागवण्डा « Loktantrapost
रेडक्रसको केन्द्रीय समिति विघटन, नयाँमा राजनीतिक भागवण्डा
१५ श्रावण २०७७, बिहीबार १६:३२
झापाबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित लोकराज ढकाल ।
झापा, १५ साउन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पुरानो कार्यसमिति विघटन गरेर सरकारले नयाँ समिति बनाएको छ ।
तर, नयाँ समिति राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा बनाइएको छ । जसमा सत्तारूढ दल नेकपा र मुख्य प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसले भागवण्डा गरेका छन् ।
नवगठित ३३ सदस्यीय तदर्थ समितिमा १९ नेकपा समर्थित छन् भने १४ जना काङ्ग्रेसका । पदाधिकारीमा ४ जना नेकपा र ३ जना काङ्ग्रेस समर्थक हुन् । झापाबाट केन्द्रीय समितिमा रेडक्रसका अध्यक्ष लोकराज ढकाल मात्र चयन भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेकपा समर्थित डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको अध्यक्षतामा नयाँ जिम्मेवारी तोकेको छ । तदर्थ समितिका उपाध्यक्षमा डा. विश्वकेशर मास्के र शर्मिला कार्की छन् ।
महामन्त्रीमा पीताम्बर अर्याल र कोषाध्यक्षमा सीताराम कोइराला छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष कार्कीका गैरसरकारी संस्था महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुन् । अर्का उपाध्यक्ष मास्के रेडक्रसकै पुरानो कार्यसमितिका उपाध्यक्ष र महामन्त्री थिए । महामन्त्री अर्याल रेडक्रसका पूर्वकर्मचारीसमेत हुन् । उपमहामन्त्री पछि चयन गर्ने बताइएको छ । उप–कोषाध्यक्षमा होमप्रसाद पाठकलाई चयन गरिएको छ ।
उपाध्यक्ष कार्की, कोषाध्यक्ष कोइराला र उप–कोषाध्यक्ष पाठक नेकपा निकट हुन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र महामन्त्री अर्याल काङ्ग्रेस समर्थित हुन् । उप–महामन्त्री पनि काङ्ग्रेस समर्थित बनाउने सहमति भएको छ ।
सदस्यहरूमा श्रीकृष्ण दाहाल, अरुण खनाल, तीर्थराज घिमिरे, लेखबहादुर हमाल, छेपाल दोर्जे लामा तामाङ, इन्द्रबहादुर गुरुङ, प्रताप विष्ट, कुमार थापा र बाबुराजा महर्जन छन् । यसैगरी शम्भुप्रसाद पोखरेल, शिवकुमार थापा, अशोक श्रेष्ठ, बाबुराम भट्टराई, उद्धवराज भट्टराई, चन्द्रकला कार्की, प्रदीप घिमिरेलाई चयन गरिएको छ । उनीहरू सबै नेकपा समर्थित हुन् ।
त्यस्तै, नागेन्द्रप्रसाद चौधरी, उमेश थापा, लोकराज ढकाल, खेमराज केसी, दीपेन्द्र ढकाल, श्यामप्रसाद डोटेल, सुबोधकुमार सिंह, जीवन राना, महेन्द्र श्रेष्ठ, लोकदर्शन श्रेष्ठ र मोहन पोखरेललाई सदस्य चयन गरिएको छ । उनीहरू काङ्गे्रस निकट हुन् ।
पुरानो समितिको कार्यकाल सकिएको भए पनि नयाँ महाधिवेशन हुन सकिरहेको थिएन भने रेडक्रसमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको छानविन समितिको ठहर थियो । यसलाई कारण देखाएर सरकारले पुरानो समिति भङ्ग गर्दै नयाँ तदर्थ समिति चयन गरेको हो । नयाँ समितिले ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गराइसक्नु पर्नेछ ।